DevOps - Leet Developers
Home Blog DevOps Page-2
DevOps 24 Oct, 2019 249
ဒီနေ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ Cloud Cloud နဲ့လူပြောများလာပါပြီ၊ သိပီးသားလူတွေအတွက်တော့ မဟုတ်ပေမယ့် မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပီး ကျွန်တော်သိသလော့ ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်ပါတယ်။ Cloud Computing ဆိုတာ.... Cloud ...
Wordpress ကို AWS Lightsail သုံးပြီး အလွယ်တကူ အသုံးပြုကြမယ်
DevOps 22 Oct, 2019 70
အခုပြောပြပေးချင်တာကတော့ Wordpress ဆိုဒ်တခုကို AWS မှာ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ Host ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Server Configuration တွေသိစရာမလိုပဲ အလွယ်တကူ Build လုပ်လို့ရတဲ့ services တမျိုးပါ။ န ...
DevOps 26 Aug, 2019 77
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး Laravel မှာ အဖြစ်များတဲ့ Storage File Log File ကို Permission မရှိလို့ error တက်တဲ့အခါမှာ log ရိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ Error လေးအတွက် Solution တခုကောင်းကောင်းလေး ရှာတွေ့ထားလို့ပါ။ ...
DevOps 20 Aug, 2019 164
Master-slave replication was the very first replication option for MySQL database. It assumes that you haveasingle Master server that accepts both reads and writes and one or more read-only Slav ...